Friday, May 21, 2010 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ bụrụ n ’ị chọpụtabeghị, agam agafela Paris na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ. Ọ bụ njem ebili mmiri na anyị na-alaghachi taa (ọ bụ 6: 30 AM ebe a). Na-eduga na njem ahụ, m gaara enwe mmasị ịmacha na French m wee ghara ịdị ka onye America amaghị ihe. Ọ dabara nke ọma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla anyị gbabara ebe a na-asụ Bekee nke ọma.
Anyị na onye ọrụ ibe anyị kwurịtara ụnyaahụ, ọ gwara anyị na ọ bụ naanị okwu abụọ ka ịchọrọ ịma na Paris ka ị ghara ịkparị ndị obodo ahụ site n'iche na ha na-ekwu okwu asụsụ gịNke ahụ ekele gị (daalụ) na biko (Nke a bụ eziokwu). O mere ka m chee echiche banyere otu anyị si emeso ibe anyị dịka azụmahịa. N'ihi na ịkwụ ụgwọ na-agbanwekarị aka, anyị na-echefukar ịsị biko ma ọ bụ daalụ.
Otu onye gwara m otu oge na ọ bụghị ebum n'uche onye ọrụ ma ọ bụ onye na-ere ahịa ime 'ọjọọ ọrụ '. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ azụmaahịa na-ekwupụta okwu, na-ezighi ezi, ma ọ bụ na-abanye n'okwu oge… ọ nwere ike ọ dịghị mgbe ezubere ka o mee otu ahụ. M ga na-arụ ọrụ a obere ike na ekele na nkwanye ùgwù na-arịọ maka ya pụta results Achọrọ m na-arụ ọrụ na ndị mmadụ na-aghọta na azụmahịa bụ azụmahịa ma eme ka a siri ike mmekọrịta na-egosi nsọpụrụ kwesịrị mgbe nile ụzọ.
Daalụ maka nkwado gị na blog. Nke m nchịkọta Adighi agha ụgha ma achọpụtara m na anyị edozila izu abụọ gara aga na uto. Nke a bụ isi na-agbanwe agbanwe nke posts. Ugbu a na njem m zuru ezu na njedebe ikpeazụ na Gingde blọgụ maka Dummies nọ, Ana m atụ anya ịme nyocha miri emi karị ma bulie ogo nke blọgụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ịchọrọ ka anyị mee, biko jiri ụdị ChaCha.me anyị na ibe ihu ụlọ iji zitere anyị ajụjụ.